FFmpeg horeyba waxaa ugu jiray taageerada WebM | Laga soo bilaabo Linux
FFmpeg horeyba waxaa ugu jiray taageerada WebM
Nooc cusub oo ah ffmpeg, maktabadaha awoodda leh ee wax lagu qoro, lagu beddelo laguna sii daayo maqalka iyo muuqaalka, soo bandhigaya horumarinno muhiim ah, oo ay ku jiraan taageerada heerarka fiidiyowga cusub.
FFmpeg 0.6 horeyba waxay u siisay taageero VP8 / WebM (iyada oo loo marayo maktabada libvpx) waxayna si weyn u wanaajinaysaa taageerada H.264 fiidiyaha muuqaalka ah.
En FFmpeg.org waxay sheegaysaa in "H.264 iyo Theora decoders-ka ay hadda si dhakhso leh uga muuqdaan isla markaana Vodbis decoder-ka uu sidoo kale arkay cusbooneysiin waaweyn."
Ugu dambeyntiina, waxaa jira horumarro badan oo saameeya koodhadhka FLAC, Ogg FLAC iyo Ogg Speex, iyo sidoo kale shaqo xoog leh oo ku saabsan kobcinta horumarka ee dhufto ee ARM -fact of muhiimad gaar ah u leh dadka isticmaala aaladaha mobilada.
Wali ma garanaysid sida loo isticmaalo ffmpeg? Kuwani aad u fiican Casharrada waxaa laga yaabaa inay ku xiiseeyaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » FFmpeg horeyba waxaa ugu jiray taageerada WebM
Waa maxay sababta cadaabta aadan taariikh ugu dhigin qoraalada?
Qaar ka mid ah tilmaamaha lagu hagaajinayo amniga Linux-gaaga
Richard Stallman oo ku yaal Córdoba laga bilaabo Juun 17 illaa 21